भारतमा ३८ जनालाई मृत्युदण्ड दिने फैसला, यस्तो छ कारण — Sanchar Kendra
भारतमा ३८ जनालाई मृत्युदण्ड दिने फैसला, यस्तो छ कारण
काठमाडौँ । एक भारतीय अदालतले २००८ मा अहमदावाद सहरमा श्रृंखलाबद्ध ब’म वि’स्फोट गराउने ३८ जना मुुश्लिम पुुरुषलाई मृ’त्युद’ण्डको सजाय सुनाएको छ ।
यसका साथै अन्य ११ लाई आमरण जेल सजाय सुनाएको छ । उक्त ब’म ह’म’लामा ५० जनाको ज्यान गएको थियो । १६ वटा श्रृंखलाब’द्ध वि’स्फोटले पश्चिमी राज्य गुजरात नराम्ररी हल्लिएको थियो ।
यो सहरमा सन् २००२ मा हिन्दु र मुश्लिम बीच दंगा भड्किएको थियो । उक्त दंगामा हजारौँ मारिएको र यसको बहुसंख्यक मुश्लिम रहेका थिए । सन् २००८ को जुलाई २६ मा भएको विस्फोटको जिम्मेवारी भारतीय मुजाहिद्दिनले लिएको छ।
सीएनएनका अनुसार न्यायाधीस ए. आर. पटेलले फासीको सजायको लागि दवाव आएपछि यो सजाय सुनाएका हुन् । यो दुर्घटनालाई दुर्लभ मध्येकै दुलर्भ मानिएको छ ।
जसमा निर्दोषहरुको समेत ज्यान गएको थियो । प्रतिवादी वकिलले आफूले उच्च न्यायालयमा अपिल गर्ने बताएका छन् । हामीले नरम खालको सजायका लागि आग्रह गरेका थियौँ ।
किनकी उनीहरुले १३ वर्ष भन्दा बढिको अवधि जेलमा बिताइसकेका छन्,’ खालिद शेखले बताए । तर अदालतले उनीहरु मध्येका धेरैलाई फाँसीको सजाय सुनाएको छ । हामी निश्चित रुपमा अपिल गर्नेछौँ ।
अमेरिकी राज्य विभागले सन् २०११ मा भारतीय मुजाहिद्दिनले पाकिस्तानसँग महत्वपूर्ण सम्बन्ध भएको जनाएको छ र भारतभरी सन् २००५ देखि दर्जनौँ ब’म आ’क्र’मणका लागि जिम्मेवार भएको जनाएको छ ।
यसले सयौँ सर्वसाधारणको मृत्युसमेत भइसकेको छ । यसले सन् २००८ मा मुम्बई आ’क्र’मणको लागि सहयोगी भूमिका पनि निर्वाह गरेको थियो जसमा १६० मानिसको मृत्यु भएको थियो ।